Mayelana NATHI - Shanghai Rainbow Industrial Co., Ltd.
IShanghai Rainbow Industrial Co, Ltd. yasungulwa ngonyaka we-2008, ihhovisi eliseShanghai, ifektri eYuyao, esifundazweni saseZhejiang, ngokuhamba okulula okuya eShanghai naseNingbo sea port Siyinkampani yobungcweti ebamba iphakethe elejwayelekile nelenziwe ngezifiso lepulasitiki, njenge-trigger sprayer, amaphampu, i-mist sprayer, ibhodlela lepulasitiki kanye nezixazululo zokupakisha ezinhle kakhulu zesuphamakethe, umkhakha wokunakekelwa kwesikhumba, i-makeup salon, umthengisi, i-wholesaler emhlabeni jikelele. Sinikeza ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme, esezingeni eliphakathi ye-OEM & ne-ODM ngentengo ephansi.
I-Rainbow Package inenani elikhulu lamakhasimende athembekile, amaningi avela emakethe yaseMelika, Canada, Europe, Oceania nase-East Asia. Ngokuthekelisa kwethu okunothile okubiza kakhulu, imikhiqizo esezingeni eliphakeme, insiza ehamba phambili, ngesikhathi sokulethwa, siyaqiniseka ukuthi singahlangabezana nazo zonke izidingo zakho futhi seqe okulindele.
Sineqembu le-R & D eliqeqeshiwe, elikwazi ukuzimela ngokuzimela futhi likhiqize isikhunta sethu. Ithimba lethu lisize amakhasimende emazweni amaningi ukuthi abone inqubo kusuka kumqondo kuya kumkhiqizo wangempela.
I-Rainbow Package ineqembu elincane, elisebenzayo, elinamandla, elizinikele ekuhlinzekeni isisombululo sephakethe lezimonyo esisodwa kuwo wonke amakhasimende. Futhi hlala njalo inqubo yokuxhumana ukuze uthuthukise ulwazi lwamakhasimende.
Into idlule ngokusebenzisa isitifiketi sikazwelonke esifanelekile futhi yamukelwa kahle embonini yethu eyinhloko. Ithimba lethu lobuchwepheshe lobunjiniyela lizohlala likulungele ukukusebenzela ukubonisana nempendulo. Sikwazile futhi ukuletha kuwe ngamasampula angabizi ukuhlangabezana nama-specs akho. Imizamo ekahle izokhiqizwa ukuletha isevisi enenzuzo nezixazululo. Uma kufanele ube nentshisekelo enkampanini yethu nasezixazululweni, sicela uxhumane nathi ngokusithumela ama-imeyili noma usishayele ngokushesha. Ukukwazi ukwazi izixazululo zethu nebhizinisi. ar ngaphezulu, uzokwazi ukuza efektri yethu ukuyibona.